My iPhone agaghị akụ! Nke a bụ ezigbo ihe kpatara ya. - Iphone
ebe m ga -edozi ihuenyo iphone m
ojoro ikekwe ihe a bu
enweghị ụda na iphone 5
Were anya nke uche gị: ’re na-echere otu oku ekwentị dị mkpa. Checked elelela iPhone gị ugboro abụọ iji jide n'aka na ụda ahụ dị na ị gbanyela olu ya niile. Mgbe ekwentị kpọrọ, ị nọ na-aga ịnụ ya. 5 nkeji na-aga na ị ilekiri gị iPhone, naanị ịchọpụta agbaghara oku dị mkpa! Etufula ekwentị gi na pusi. N'isiokwu a, m ga-akọwa gịnị kpatara iphone gi agaghi etinyere m gha egosi gi kpom kwem esi edozi ya.
Mmelite: Ọ bụrụ na ị nwere iPhone 7, isiokwu a ga - arụ ọrụ maka gị - mana ị nwere ike ịchọ ịlele isiokwu ọhụrụ m akpọrọ My iPhone 7 agaghị agbanye n'ihi na ihe iPhone 7-kpọmkwem ije ije. Ma ọ bụghị ya, nọgide na-agụ!
Martha Aron kpaliri m ide edemede a mgbe ọ jụrụ, “My iPhone anaghị ada na oku niile, ana m echefu ọtụtụ oku na ederede n'ihi nke a. Ị nwere ike ị nyere m aka?' Mata, m bịara ebe a iji nyere gị na ndị ọzọ ọ bụla gbaghara oku na ederede maka iPhone ha anaghị akụ.
Eleghị anya ịmara nke a, mana lelee agbanyeghị…
Ọ bụrụ na ị na-agụ isiokwu a, ọ ga-abụrịrị na ị maraworị na ka iPhone gị daa, mgbanaka Mgbanaka / Silent n'akụkụ nke iPhone gị ka a ga-agbanye.
Ọ bụrụ na a gbanye mgba ọkụ ahụ na ihuenyo ahụ, a na-agbanye ụda gị iPhone. Ọ bụrụ na agbanyere mgba ọkụ ahụ na azụ iPhone, iPhone gị dị jụụ na ị ga-ahụ obere eriri oroma n'akụkụ mgba ọkụ ahụ. Ga-ahụkwa akara ngosi okwu na ngosipụta iPhone mgbe ị gbanye mgba ọkụ.
Ozugbo ị kwenyesiri ike na agbanyere mgbanaka mgbanaka / Silent ka ọ daa, gbaa mbọ hụ na ọkpụkpọ iPhone gị tụgharịrị ka ị nwee ike ịnụ mgbanaka iPhone gị mgbe ị kpọrọ oku. Nwere ike gbanye ringer olu site na ịpị olu elu button n'akụkụ nke gị iPhone.
esi zoo nọmba mgbe ị na -akpọ
I nwekwara ike gbanwee olu ringer site na imeghe ya Ntọala -> undsda & Haptics . Dọrọ mmịfe ahụ n'okpuru Ringer Ma mata n'aka nri ka ịgbanwee ụda olu na iPhone gị. N’ihu ị na-adọrọ ihe mmịfe ahụ gaa n’aka nri, ụda ahụ ga-ada ụda.
Ọ bụrụ na iPhone gị anaghị eme ụda ọ bụla ma ọlị , edemede m banyere ihe ị ga-eme mgbe igwe okwu iPhone kwụsịrị ịrụ ọrụ ga-egosi gị otu esi edozi nsogbu ahụ. Ọ bụrụ na ịmeela ihe a niile, lee ihe kpatara iPhone gị anaghị akụ:
Nke a bụ ihe ndozi: Gbanyụọ Nsogbu!
Imirikiti oge, ihe kpatara iPhone anaghị akụ maka oku mbata bụ na onye ọrụ agbanweela na atụmatụ Do not Disturb feature in Settings. Ekwekwala nsogbu ịgbachi nkịtị oku, alerts, na ificationsma Ọkwa na gị iPhone.
Kedu ka m ga - esi mara ma agbasaghị ọgba aghara?
Easiestzọ kachasị mfe ị ga - esi agwa ma ọ bụrụ na agbasala nsogbu bụ ile anya n’elu aka nri nke iPhone gị, n’akụkụ aka ekpe nke akara ngosi batrị. Ọ bụrụ na agbanyere nsogbu, ị ga-ahụ obere akara ngosi ọnwa n’ebe ahụ.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịmaba n'ime miri emi Edochila nsogbu ma setịpụ usoro akpaka, dịka ọmụmaatụ, gaba na Ntọala -> Ekwela nsogbu iji hụ nhọrọ niile dịịrị gị.
Olee Otú M Ga-esi Ghara urbgbaghara?
Kemgbe Apple wepụtara iOS 7, ọ dị mfe ịgbanwuo ma gbanyụọ Adịla nsogbu. Swipe elu na ala nke ihuenyo gị iPhone imeghe Ogwe njikwa. Pịa akara ngosi ọnwa iji gbanye ma ọ bụ gbanyụọ ya. Ọ bụ ya!
Nke a nwere ike ịdị iche maka ụdị iOS dị iche iche. Ọ bụrụ na ị nwere iPhone X ma ọ bụ nke ọhụrụ, mepee Control Center site na ịpụ site n'akụkụ aka nri elu nke ihuenyo ụlọ.
I nwekwara ike gbanyụọ Ekwela nsogbu site na ịga na Ntọala -> Ekwela nsogbu ma gbanyụọ mgba ọkụ na-esote Enyena nsogbu . ’Ll ga-amata na Ekwela nsogbu mgbe agbanweela na-acha ọcha.
Gbanyụọ 'ndị na-akpọ oku amị'
Otu ihe mere i nwere iPhone mgbanaka nsogbu nwere ike ịbụ n'ihi na gị igbochi ndi na-akpo oku amaghi agbanyere atụmatụ. Njirimara a dị mma maka ịkwụsị telemarketers na robocalls na egwu ha, mana ọ dị nwute na ọ na-ewepụkwa ụfọdụ ndị ịchọrọ n'ezie ịgwa.
Iji gbanyụọ ya, gafere ya Ntọala -> Ekwentị wee gbanyụọ Ndị na-akpọ ndị na-amaghị ihe n’ekwughị okwu. Ozugbo imesịrị nke ahụ, ekwentị gị ga-enwe ike ịpị ọzọ mgbe onye na-anọghị na kọntaktị gị na-anwa ịkpọ gị.
Gịnị ma ọ bụrụ na My iPhone N'agbanyeghị Agaghị agbanye mgbịrịgba?
Enwetara m okwu ole na ole site na ndị na-agụ akwụkwọ ndị werela ntụnye niile na ndị iPhones ka na-anaghị ada. Ọ bụrụ n’ị meela nke a ma iPhone gị anaghị akụ, enwere ezigbo ohere ị nwere ike inwe nsogbu ngwaike.
Ọtụtụ mgbe, mgbe gunk ma ọ bụ mmiri mmiri odụk otu n'ime ọdụ ụgbọ mmiri (dị ka ekweisi Jack ma ọ bụ àmụmà / n'ọdụ ụgbọ mmiri njikọ), gị iPhone na-eche enwere ihe etinye n'ime ya, mgbe n'ezie ọ nweghị. Edemede m banyere otu esi edozi iPhone nke edobere na ọnọdụ isi na-akọwa ihe kpatara nke ahụ na otu esi edozi nsogbu ahụ.
iphone 6 anaghị ada ụda mgbe akpọrọ ya
Ọ bụ ogologo oge, mana ị nwere ike were ahịhịa antistatic (ma ọ bụ ncha ezé ị na-ejitụbeghị mbụ) ma nwaa ịmịpụ egbe ahụ site na isi okwu isi gị ma ọ bụ ọdụ ụgbọ mmiri ọkụ / ọdụ ụgbọ mmiri. Antistatic brushes na-enye aka maka nhicha ụdị eletrọniki niile, ị nwere ike bulie otu ngwugwu 3 na Amazon ihe na-erughị $ 5.
Ọ bụrụ na ị nwere ihe ịga nke ọma, okwu ahụ kwesịrị idozi onwe ya. O di nwute, otutu oge emebiwo ihe. Ihe dị mkpụmkpụ dị n'ime iPhone gị, yabụ naanị ihe ngwọta bụ ịga leta Storelọ Ahịa Apple gị ma ọ bụ jiri nhọrọ ntinye akwụkwọ na Ebe nrụọrụ weebụ na-akwado Apple ka emezie iPhone gị.
Ndozi Storelọ Ahịa Apple nwere ike ịdị oke ọnụ. Ọ bụrụ na ị na-achọ nhọrọ dị ọnụ ala, m na-akwado Pulse , ụlọ ọrụ nrụzi nke ga-eziga onye ọrụ aka ya nke gị onye nwere ike izute gị ma dozie iPhone gị n’ime otu awa.
Ugbu a nwekwara ike ịbụ ezigbo oge iji kwalite iPhone gị. Ndozi nwere ike ịbụ ọnụ, karịsịa ma ọ bụrụ na ihe karịrị otu ihe na-ezighị ezi na gị iPhone. Kama imefu ọtụtụ narị dollar n'ọrụ mmezi, ị nwere ike iji ego ahụ zụta ekwentị ọhụrụ. Lelee UpPhone si ekwentị mkpịsị aka ngwá ọrụ ịchọta ihe dị ukwuu na iPhone ọhụrụ!
Ekwekwala nsogbu bụ otu n’ime atụmatụ ndị ahụ dị egwu ma ọ bụrụ na ịmara otu esi eji ya, mana ọ nwere ike iwute gị ma ọ bụrụ na ịmeghị ya. Nye Mata na ndị niile agbaghara oku dị mkpa ma ọ bụ kpọọ mkpu 'My iPhone agaghị ada!' na aka ya dị ọcha na-ekiri, M na-atụ a n'isiokwu nwere ị na-edozi gị nkịtị iPhone nsogbu. Ọ bụrụ n’inwee ajụjụ ndị na-esochi ma ọ bụ ahụmịhe ndị ọzọ ị ga-eso kesaa, debe ha n’isiokwu ndị dị n’okpuru. Ana m atụ anya ịnụ olu gị!